VaNyoro neVaGungu vanoti buta (n. bow) kureva uta. Mafwe vanoti mata (n. mata) vachireva uta pakuwanda.
VaHerero vanoti omu-zi (arrow point) vachireva munzi wemuseve. VaKongo vanoti tota (arrow) kureva museve.
VaSwahili vanoti tora (spear with a narrow head).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Uta_neMuseve&oldid=75355"
This page was last edited on 6 Chikumi 2020, at 20:32.